”Waa qayb ka mid is ballaarinta NATO ee Afrika!” – Fal-celinta shacabka Kenya ee soo dhowaynta Xasan Sh ee soo noqoshada Maraykanka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waa qayb ka mid is ballaarinta NATO ee Afrika!” – Fal-celinta shacabka...
”Waa qayb ka mid is ballaarinta NATO ee Afrika!” – Fal-celinta shacabka Kenya ee soo dhowaynta Xasan Sh ee soo noqoshada Maraykanka
(Hadalsame) 18 Maajo 2022 – Saxaafadda Kenya ayaa wax ka qortay in Madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya uu soo dhoweeyey in ciidamada howlgallada gaarka ah ee Maraykanku ay mar kale saldhig ka dhigtaan Soomaaliya si ay gacan uga gaystaan dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyey Madaxwaynaha Maraykanka ee Joe Biden Talaadadii qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka, isagoo ku tilmaamay Maraykanka “saaxiib la isku hallayn karo dhanka raadinta xasilloonida iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada.”
Yeelkeede, dadka Kenyan-ka ah ayaa si la yaab leh uga fal-celiyey arrintan iyagoo inta badan ku nuuxnuuxsaday in Maraykanku aanu wanaag u wadin Somalia iyo guud ahaanba Afrika.
”Kenya-na halla keeno hanna gumaysteen annagana e, kuwa na xukumaba halkan ayay nagu gumaystaan,” ayay tiri Annitta Nice oo gumaysi ku mitaashey ciidamadan.
”Dalkiisii ayuu iibiyey,” ayuu soo qoray Anthony Kerry.
”Al Shabaab waxay Somalia ka dhigeen meel aan lagu noolaan karin waana sababta ay Soomaalidu tarab tarab ugu imanayaan Kenya oo ay mar dhow ka noqonayaan qoowmiyadda ugu ballaaran, taasoo waloow ay dhinac ka xun tahay dhinaca kale ka wanaagsan marka aad eegto waxa ay ka sameeyeen Eastleight.” ayuu yiri Simon Kiny.
”Hogaamiyeyaashu waa dhibka Afrika ka jira bal midkan eega!” ayuu yiri Joash Mandago.
”Waa sida sariir loola seexdo gumaystaha. Maraykanku waligii wanaag ugama jeedin Afrika. Waa wax walba waxay ku saabsan yihiin dhiig-miirasho. Dhibaatooyinka Afrika waxay u baahan yihiin xal Afrikaan ah. Waan u garaabayaa madaxweynahan,” ayuu qoray Icon Charles Arwa.
”Saldhiggani waxaa uu noqonayaa kii labaad ee uu Maraykanku ka hirgeliyo Afrika. Midkii ugu horreeyey waxaa horey loogula heshiiyey Zambia iyadoo taageero laga helayo Koonfur Afrika iyo Rwanda waana is balaarinta laga baqayo ee NATO. Ilaahow Afrika caawi!” ayuu baryey Toveli Chauganga.
”Ninkan waxaa doortay 300 oo qof oo kaliya, wuxuuna joogaa 72 saac oo qura,” ayuu yiri Dennis Weps.
”Farmaajo ma tebi doonno,” ayuu saadiyey Kasim Calvin.
”Haddana mar kale, sirdoonkeenna iyo ammaankeennu waxay u baahan yihiin inay feejignaadaan, waa fikirkayga uun,” ayuu soo jeediyey Simon Machalia.
”Waxaad maqli doonaan weerarrada Al Shabaab oo kordha,” ayuu yiri Roggy Kigen.
”Waa khalad wayn,Soomaaliya waxay ku noqon doontaa waayihii hore ee dagaalka,” ayuu soo qoray Hon. Jeserem KE.
”Waxaad gurigaaga ku casuumaysaa 😈?🙄😐 Balse maxaa ka khaldan madaxwaynaha dooran?” ayuu is waydiiyey Lubega John Calvin.
”Waa khalad aad u wayn, waana colaadda gobolka ku wajahan. Tani waa waxa Biden ugu yeero isbeddel maamul.” ayuu ku dooday Necks John.
Waa jawaabihii ugu doorka roonaa ee dadka Kenyan-ka ihi ka bixiyeen soo noqoshada Ciidamada Maraykanka ee Somalia, iyadoo ay la yaab tahay sida ay u saluugsan yihiin Maraykanka oo ay iyagu olog la yihiin marka loo eego Somalia.
Previous articleIsrael & Ruushka oo ay ka tafatay & gantaalaha S-300 oo markii ugu horreeysey lagu ridey dayuuradeheeda
Next articleDAAHA GADAASHIISA: MW dooran oo durba madaxa la galay mashaqo uu horay usoo maray MW degaya